GM3560T Chencan Size Big 5 dhidibka wax taaj oo kale CNC router Center Geeddi-socodka - Shiinaha Shandong Chenan Makiinado
Chencan GM3560T Size Big Center Hab-5 dhidibka wax taaj oo kale CNC router
GM3560T waa xarunta Chencan is-horumariyo 5 xis machining, la dunmiiqa awood badan, size shaqo weyn, xawaaraha si dhakhso ah, sax sare iyo waqti kor u dheer.
1. edaab design computer-dhameeya si loo gaaro design dhismaha mashiinka ayaa si mug leh. By u eegis dhaqaajin karo iyo hab miiska go'an, mashiinka oo dhan waxaa welded la xoojiyo qaab dhismeedka steel. feeraha Xoojinta waxaa welded gudaha. Habab badan ayaa ka mid ah daaweynta gargaarka stress si weyn loo hagaajiyo rigidity mashiinka oo dhan iyo baaraandegi by daaweyn tempering heerkulka sare si loo xaqiijiyo in xasilooni waa mid fiican, ma fududa in la doorinaynaa,
2. dhidibka Z ay qaataan sax sare sax sare maskaxda fur kubada iyo Z iyo lacagta dunmiiqa saxan oo dhan isticmaali design culus ay u oggolaadaan sax sare iyo xasiloonida marka shaqada qalabka adag;
3. Guide rail iyo hayayaashii lagu daboolay gudaha caddayn ciidda. Boorka design cadeyn u sii doonaa waxa daahirka ah;
4. dhidibka Z isticmaali design dhululubo dheelitirka nitrogen dual, kaas oo wax ku ool ah oo yaraynaysa awood loading motor iyo kordhiyo nolosha adeega mishiinka ee. No mashiinka isticmaalka baahan cadaadiska hawada;
5.Switzerland Tirintii nidaamka gacanta 5 dhidibka nidaamka la xidhiidha USB iyo gacanta uu furmo suuqa si ay u sameeyaan qaliinka more fudud iyo golaha wasiirada gacanta nidaamka sarrifka kulaylka USA;
6. Afyare T tuuray miiska shaqada bir ah, habka daaweynta tempering sare, ma fududa in la doorinaynaa. dhererkiisu max, waayo, mid miiska gabal waa 2 milyan si ay u haboon in weelka;
7. design kale oo dayactir aan u isticmaalno brand sare, sida nidaamka Oil auto, nidaamka auto ceeryaamo saliid, dunmiiqa auto nidaamka qabow la chiller, cable Germany Igus, hore difaaca & albaabka dib u ... design All si loo hubiyo in mashiinka oo dhan ugu fiican waxqabadka,
• size XYZ Working: 3500mm * 2200mm 6000mm *;
• dunmiiqa: Italy 24Kw dunmiiqa (A ± 120 °, C ± 360 °) la set oo dhan 5 dhidibka shaandheyn madaxiisa u dhow;
• xawaaraha dunmiiqa: 24000rpm / m,
• Jadwalka: miiska bir ah ku tuura;
• Switzerland Tirintii Motor Howlsocodsiinta iyo nidaamka drive;
• Switzerland Tirintii nidaamka gacanta 5 dhidibka la function 5 dhidibka dhab ah;
• dhidibka xy: laga keeno hayayaashii helical iyo gudbinta pinion ;;
• dhidibka Z: Taiwan maskaxda sax sare fur kubada;
• XYZ: Taiwan HIWIN 6 heerka rail afar gees ah,
• magazine Tool: toosan magazine qalab nooca la haystaha 8 qalab;
• Nidaamka sifaynta Automatic;
• Nidaamka ceeryaamo saliid Automatic;
• Nidaamka pneumatic Nitrogendoksid;
• qaybaha kale ee korontada ku isticmaali Schneider ama Siemens;
1. warshadaha Die: farshaxan kasta oo aluminium, xumbo, caag, PVC, qoryo, Maro adag iyo qalabka kale ee jilicsan-macdan ah,
2. warshadaha caaryada: kasta caaryada gaari nooca, caaryada doon, caaryada macdantu, caaryada duulista, caaryada dia, iwm;
3. Plate warshadaha: ningax, aluminium, caag ah iyo kiimikada, PCB ah, guurto jirka baabuurka, rukuucsan, track, xiddigaha guddiga anti-gaar ah, epoxy, cusbi, ABS, PP, PE, iyo carbon isku dar oo kale;
3 dhidibka Qaab CNC router
4 Qaab dhidibka CNC router
5 Qaab dhidibka CNC router
Casting Machine caaryada
caaryada Shiinaha CNC Machines Factory
caaryada Design CNC Machine Center
EPS caaryada xumbo CNC Machine Center
EPS caaryada CNC router
caaryada dibadda Wall Design CNC
caaryada Five dhidibka Processing Center
caaryada xumbo Samaynta CNC router
caaryada macdantu CNC Machine
caaryada CNC Factory
caaryada CNC Machine
caaryada Machine CNC Center Factory
caaryada CNC router
Caaryada, Uumahaaga CNC Machine Center
caaryada Samaynta CNC router Machines
Bamgaree Qaab Samaynta Machine CNC
caaryada naqshad CNC Machine